Thutasonelin | Buddhist Knowledge Competition
Welcome to Our Buddhist Knowledge Competition
Thu Ta Sone Lin means Buddhist Knowledge Competition. It was established in 2012 as the whole burmese Competition. Last Year, 2012 was the greatest Year of Our Buddhists. ‘Cause There was appear The Buddha on the full moon day of Ka Sone. It is also called Vesak Day in the world. last year was the 2600 full year of the Buddha’s Date. Our Commette started to try to collect Students who were from various kinds of Buddhist Culture Schools and set First and Second Entrance in Yangon. 20% chooced for the next Entrance Exam. Only 24 Students were collected to the Final Competition. 10 Lark Valuable Presents go to the first prise,7lark valuable presents go the second prise and5Lark Valuable Presents to the third price. We, The Sanghas and Directors made decition after Vesak Days Ceremony (2600) that this Competition ought to be held in every year for all students.
ပြိုင်ပွဲဆိုင်ရာ အကြိုလုပ်ငန်းစီမံချက် ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခြင်း
သုတစုံလင်ဗုဒ္ဓ၀င်အဖွဲ့ အမှုဆောင်အစည်းအဝေး ၂/၂၅၅၈ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်က လက်မှက်ရေးထုိုး၍ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်ကုို ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ပြိုင်ပွဲအကြို လုပ်ငန်းစီမံချက် သုတစုံလင်ဗုဒ္ဓ၀င် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်က အောက်ပါလုပ်ငန်းစီမံချက်ကုို…Read More
၂၄ ဦးစာရင်း ၂၀၁၅
၁.၂၀၁၅.၀၅၁၇ မောင်အောင်ရဲသူ၊ ရတနာပျိုးခင်း ၁.၂၀၁၅.၀၅၁၈ မောင်ကျော်ထင်၊ ရတနာပျိုးခင်း ၅.၂၀၁၅.၀၀၅၆ မအေးအေးဖြိုး မိသားစုဓမ္မစာသင်ဝုိုင်း ၂.၂၀၁၅.၀၁၂၃ မရွှေရည်ဖူး လှိုင်ရတနာဓမ္မစကူးလ် ရန်ကုန် ၁.၂၀၁၅.၀၄၀၆. မပန်းနုဆွေ ရန်ကင်းတောရ နေပြည်တော်…Read More
၂၀၁၅ စင်တင် ရွေချယ်မှု ထုတ်ပြန်ကြေငြာ
၂၄ ဦးစာရင်း စာဖြေသူအားလုံးသုို့ ပန်ကြားချက်
စာစစ်ဆေးခြင်းကိစ္စပြီး၍ အမှတ်များ ပေါင်းခြင်း၊ စာရင်းများ ရေးသွင်းခြင်းကိစ္စ ပြုလုပ်နေပါပြီ။ အမှတ်စဉ်ခြင်းကိစ္စပြီးသည့်အခါတွင် ဂုဏ်ထူးအောင်၊ အထူးအောင်များကို ဦးစွာ ထုတ်ပြန်ပေးပါမည်။ ထုို့နောက် (၂၄)ဦးစာရင်းကုို အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ပါ့မည်။ သုတ Admin
သုတ-၂၀၁၅ ပ-ဆင့် ၀င်ခွင့်အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာ
သို့ ပြိုင်ပွဲဝင်စာဖြေသူ/စာဖြေဌာနအားလုံး စတုတ္ထအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သုတစုံလင်ဗုဒ္ဓ၀င်ပြိုင်ပွဲ ပထမဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို နိုင်ငံအ၀န်း စာဖြေဌာန (၉)ခုခွဲ၍ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ရာ ဒုတိယဆင့်သို့ ဆက်လက် ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်းကို…Read More
ရည်ရွယ်ချက်	၁။	ဗှုဒ္ဓဖြစ်တော်စဉ် (ဗုဒ္ဓ၀င်)ကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ဘာသာတရား၏တန်ဘိုးကို လက်တွေ့ကျကျ သိရှိနိုင်ကြရန်။ ၂။	ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ လိမ္မာယဉ်ကျေး၍ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာများ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်။
၃။	အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ချစ်မြတ်နိုး၍ ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်သည့်အဆင့်မှ အသုံးချနိုင်သည်အထိ တိုးတက် မြင့်မားလာစေရန်။
© Copyright 2014. Thutasonelin Buddhawin Organization. All Rights Reserved. Created by Ye Min Aung,Creative Designer.